L-Lysine HCL (L-Lysine Hydrochloride) Qiimaha, Alaab-qeybiye ka socda Bolise
[Lambarka CAS] 657-27-2
[Formula Molecular] C6H14N2O2 • HCL
[Miisaanka Molecular] 182.65
J: Hagaajinta garaadka, kobcinta kobaca, kor u qaadida jirdhiska jirka.
B: Rabitaanka cuntada oo kordha, hagaajiya nafaqo -xumada.
C: Caawi soo saarida unugyada difaaca jirka, hormoonnada iyo enzymes si kor loogu qaado difaaca, kordhinta hemoglobin
D: Wuxuu caawiyaa nuugista kalsiyumka.
Ku saabsan L-Lysine HCL (L-Lysine Hydrochloride)
L-Lysine HCl aad ayaa loo nadiifiyey ilaa 98% kadib halsano.
L-Lysine HCL waa mid ka mid ah asiidhyada asaasiga ah ee jirka bini'aadamka, kaas oo kor u qaadi kara horumarka aadanaha, kor u qaadi kara shaqada difaaca, iyo hagaajinta shaqada unugyada dhexe ee neerfayaasha. Lysine waa amino acid asaasi ah oo aasaasi ah. Sababtoo ah maadada lysine ee firileyda ayaa aad u hooseysa, si fududna waa loo burburiyaa oo la waayaa inta lagu guda jiro howsha, waxaa loogu yeeraa amino acid -ka xaddidan ee ugu horreeya.